Ntuziaka ahụike COVID-19 ọhụrụ maka ọdụ ụgbọ elu International Entebbe Uganda
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Ntuziaka ahụike COVID-19 ọhụrụ maka ọdụ ụgbọ elu International Entebbe Uganda
Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Uganda
Ụlọ ezumike International Entebbe
Na-esote mmalite nke ụlọ nyocha COVID-19 na ọdụ ụgbọ elu Entebbe International site n'aka Onye isi ala YK Museveni na Ọktoba 22, 2021, Gọọmenti Republic of Uganda enyela ntuziaka dị irè na Ọktọba 27, 2021, ruo mgbe ọkwa ọzọ na usoro ahụike COVID-19 na Ọdụ ụgbọ elu Entebbe International Airport.
Ndị njem na-erute na Entebbe International ka a ga-enyocha ule COVID-19 n'agbanyeghị ebe ha siri bịa ma ọ bụ ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
A ga-ebufe ndị njem nyochara ihe dị mma n'ụlọ ọgwụ.
Ndị njem nwere ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 ma jide asambodo ga-enwerịrị asambodo nnwale COVID-19 PCR na-adịghị mma ewepụtara n'ime awa 72 nke ịbanye.
The ntuziaka na-arụ ọrụ October 27, 2021, ruo mgbe e wepụtara ọkwa ọzọ site na ọkwa Civil Aviation Authority Uganda, Ọrụ Ozi Aeronautical dị ka ndị a:
1. Ndị njem niile na-abata na Ọdụ ụgbọ elu International nke Entebbe a ga-anwale COVID-19 n'agbanyeghị obodo si ma ọ bụ ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
2. Naanị ihe agụpụtara bụ:
3. Ndị njem nwalere ihe dị mma maka COVID-19 ma ha bịarutere ka a ga-enye nkwado nke mmụọ ma bufee ya na ụlọ ọgwụ ọha na nkeonwe gazetted ebe a ga-ejikwa ụbọchị asaa wee wepụ ya na ule PCR na-adịghị mma.
4. Ọgwụgwọ maka ndị njem nọ na (3) n'elu ga-abụ n'efu na ụlọ ọgwụ ọha. Agbanyeghị, ndị njem na-ahọrọ ụlọ ọgwụ nkeonwe ga-akwụ ụgwọ ha.
5. N'ihe banyere ndị njem na-abata, ọ bụrụ na ha nwere asymptomatic ma ọ bụ na-arịa ọrịa dị nro, a ga-ejikwa ha na họtel ndị njem nleta.
6. Ndị njem nlegharị anya nọ na (5) dị n'elu bụ ndị na-aga n'ihu na ọrịa siri ike ga-ebuga n'ụlọ ọgwụ nke ha chọrọ.
7. Ndị njem na-abata ga-akwụ US$30 ma ọ bụ otu ihe na Uganda Shillings maka ule COVID-19 PCR.
8. The ugwo na (7) n'elu nwere ike ime online ma ọ bụ na mbata na-eji ebe nke ahịa igwe, mobile ego, ma ọ bụ ego.
9. Ndị njem niile nke ahụ ha na-adịghị karịa 37.5°C (99.5°F), enweghị ụkwara na-adịgide adịgide, ike iku ume, ma ọ bụ ihe mgbaàmà ndị ọzọ yiri flu ka a ga-ahapụ ịbanye ma ọ bụ pụọ na Uganda.
10. Entebbe International Airport Port Health ga-akwado maka mbata ma ọ bụ ịpụ akwụkwọ nyocha COVID-19 PCR na-adịghị mma emere n'ime awa 72 site na nchịkọta nlele. Nke a na-ewepu oge ngafe na ọnụ ụlọ.
11. Ndị njem nwere ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 ma jigide asambodo ga-enwerịrị asambodo nnwale COVID-19 PCR na-adịghị mma ewere n'ime awa 72 site na nchịkọta nlele ruo ụgbọ elu. Nke a bụ n'ihi na ọgwụ mgbochi ahụ anaghị echebe 100%, ọ na-ewekwa ọtụtụ ụbọchị/izu iji malite nchebe.
12. A ga-achọrọ ndị njem na-apụ na mba ahụ ka ha nweta akwụkwọ nyocha COVID-19 PCR na-adịghị mma n'ime awa 72 site na nchịkọta nlele. Ha ga-erube isi na mkpa njem ahụike nke obodo ebe ha na-aga.
13. Ndị njem na-abịarute n'oge a na-alọta, na/ma ọ bụ site na mpaghara dị n'ofe Kampala nwere tiketi ụgbọ elu na ngafe ịbanye ga-ahapụ ka ha gaa n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ na / ma ọ bụ ebe obibi ha.
14. Ndị njem na-apụ na oge nkwụsị, na / ma ọ bụ site na mpaghara ndị dị n'ofe Kampala nwere tiketi ụgbọ elu dị mma ga-ahapụ ka ha gaa n'ọdụ ụgbọ elu ebe ha na-aga site n'igosi ndị ọchịchị tiketi ndị njem dị ka ihe akaebe nke ịga n'ọdụ ụgbọ elu.
15. Ndị ọkwọ ụgbọ ala kwesịrị ịnwe ihe akaebe na-egosi na ha si n'ọdụ ụgbọ elu (dị ka tiketi ụgbọ elu ma ọ bụ tiketi ndị njem) si n'ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ buru ndị njem.
16. A na-anabata ụgbọ elu ikuku nke mmadụ na-abanye n'obodo ma ọ bụrụ na ọnọdụ ndị a emezue:
– Asambodo ahụike ihe kpatara ọnwụ.
- Mpempe akwụkwọ ikike ngafe / akwụkwọ njirimara nke onye ahụ nwụrụ anwụ (Paspọtụ mbụ / akwụkwọ njem / akwụkwọ njirimara nke a ga-enye ndị ọrụ mbata na ọpụpụ) v. ikike mbubata / ikike mbubata site n'aka Director General of Health Services.
- A ga-enyocha akwụkwọ ahụ site na ahụike ọdụ ụgbọ mmiri na igbe ahụ mgbe ọ bịarutere ga-emetọ ya site na ahụike ọdụ ụgbọ mmiri.
17. Iji weta ozu mmadụ na obodo a ga-enwetarịrị n'aka Ministri ahụike na mba ofesi.
A na-enyocha ndị njem nlegharị anya ngwa ngwa
Emeela ka ndị njem nlegharị anya ọsọ ọsọ dịka ndị a:
Mgbe ha rutere, a ga-ebuga ndị njem nlegharị anya gaa n'ụlọ ebe a na-eme njem nlegharị anya ebe a ga-ewere sample ha maka nnwale.
Ha ga-aga n'ihu maka nkwenye na ebe ndị njem nlegharị anya ebe ndị nnọchi anya AUTO (Association of Uganda Tour Operators) na UTB (Uganda Tourism Board) ga-agakwuru ha, a ga-ahapụkwa ha ka ha gaa n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke ha chọrọ n'ime Entebbe.
A ga-eziga nsonaazụ ha site na mail ma ọ bụ WhatsApp, dabere na nke dabara adaba, n'ime awa 2 1/2.
Ndị njem nlegharị anya ga-echere n'ọdụ ụgbọ elu maka nsonaazụ ha, karịa 1 1/2 awa.
A na-agba ndị njem nlegharị anya ume akwụkwọ maka ule ha ebe a.